Weerar Hoobiyeyaal ah oo lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidanka AMISOM | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Weerar Hoobiyeyaal ah oo lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidanka AMISOM
Wararka laga helayo Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay weerar hoobiyeyaal ah ay Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ku qaadeen saldhiga Ciidamada Jabuuti oo ka tirsan AMISOM ku leeyihiin Galbeedka Magaalada Beledweyne.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in xalay xilli dambe la maqlay dhawaqa hoobiyeyaasha lagu weeraray Xerada Ciidamada Jabuuti oo ku taalla Suuqa Xoolaha ee Kaba laays ee Xafada Holwadaag ee Magaalada Beledweyne.
Weli lama oga khasaaraha ka dhashay hoobiyeyaashaas oo la sheegay inay gaarayeen ilaa lix, kuwaas oo dadka Beleweyne qaarkood ay sheegeen inay dareemeen cabsi ballaaran.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada AMISOM dhankooda ay ku jawaabeen tiro hoobiyeyaal ah,kuwaas oo la sheegay in aysan geysan wax khasaaro ah,waxaana xigay howlgal ay sameeyeen Ciidamada Jabuuti oo ka tirsan AMISOM.
Wararkii ugu dambeeyay ee Beledweyne aan ka heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in saakay Xaafado ka tirsan magaaladaas iyo duleekeea ay howlgallo ka wadaan Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyaga oo baadi goobaya dadkii ka dambeeyay weerarka hoobiyeyaasha ahaa.
Weerar Hoobiyeyaal ah oo lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidanka AMISOM was last modified: June 29th, 2020 by Admin